iPhone 11 Pro Model Isa (A2160, A2215, A2217) - Fitaovana
Ny iPhone 11 Pro dia telefaona finday premium hita ao amin'ny fivarotana paoma. Efa elaela io. Tian'ireo mpampiasa ny telefaona noho ny endriny mahafinaritra sy ny endrika avo lenta. Azonao atao ny manandrana izany ary mahazo traikefa tsara rehefa milalao lalao, miantso, ary amin'ny ankapobeny amin'ny Internet. Misy kinova hafa amin'ny telefaona misy an-tserasera.
Afaka mahita ilay mifanentana amin'ny zavatra ilainao rehetra ianao. Manoro hevitra anao izahay mba hijery kely alohan'ny hanaovana ny fividianana. Voafetra amin'ny faritra vitsivitsy amin'ny Internet ireo. Amin'ity toro-lalana ity dia hofongarantsika daholo ny fisalasalanao momba ilay iPhone 11 Pro mahafinaritra.
Endri-javatra ny iPhone 11 Pro:
Ny iPhone 11 Pro dia misy fiasa tsy manam-paharoa taonina. Amin'ity fizarana ity dia hijerena izay rehetra azo atao amin'ny alàlan'ity fitaovana tsy manam-paharoa ity. Afaka mankafy tombontsoa premium amin'ny vidiny mora izao ny mpampiasa. Misy safidy maro eo amin'ny latabatra raha momba ny fitaovana avy amin'ny Apple. Iray amin'ireo smartphone voalohany io. Ny fandefasana ny iPhone 12 dia hampihena ny vidin'ity kinova ity amin'ny fomba mahery vaika. Fotoana mety hampiasa vola amin'ity vokatra ity. Ireto misy tombony sasany amin'ny fananana iPhone 11 Pro. Ireo fiasa dia mijanona ho fahita eo amin'ireo isa maodely samihafa amin'ny fitaovana.
Ny efijery dia mamorona ny fo sy ny fanahy amin'ny finday avo lenta maoderina. Azonao atao ny mahita ny valiny tsara amin'izany amin'ny alàlan'ny fitaovana mahafinaritra.
Ireo mpampiasa dia afaka mankafy atiny avo lenta amin'ny alàlan'ny iPhone 11 Pro. Ny efijery 5.8-inch dia ny refy mahazatra ho an'ny finday avo lenta maoderina — ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tia an'ity habeny ity ho fampiononana azy ireo. Ny efijery dia tsara ihany koa raha jerena miaraka amin'ny fanamarinana HDR 10. Mampiasa ny teknolojia XDR OLED ho an'ny fahamendrehana loko.
2. Mafy ety ivelany sy anatiny
iPhones dia manana laza mahatsiravina raha resaka hamafisana. Matetika izy ireo no mora vaky. Azonao antoka fa amin'ny alàlan'ny tranga iray dia ho henjana ny fitaovanao. Ny iPhone 11 Pro dia miaraka amin'ny fanamarinana IP68.
Izy io dia mahatonga ny fitaovana tsy ho tantera-drano tanteraka hatramin'ny 4 metatra. Izy io koa dia mahatohitra vovoka mba hitazomana ny tadinao ho afaka.
3. Fametrahana fakan-tsary telo
Tsy afaka mandeha tsy mety amin'ny fananganana fakan-tsary mahafinaritra telo ianao. Manampy anao amin'ny tsindry sary mahavariana amin'ny toerana samihafa izany. Misy lenta telo tsy manam-paharoa misy naoty 12MP. Ireo dia mahomby amin'ny fampiasana anao amin'ny alàlan'ny fitaovana. Mahazo fakantsary fakan-tsary malalaka sy malalaka ary telephoto ireo mpampiasa.
Afaka maka sary manaitra ianao amin'ny alàlan'ny maody alina, maody fakana sary ary fomba mifantoka. Ilaina amin'ny tifitra lavitra ihany koa. Afaka mandray horonantsary 4K 60FPS ny mpampiasa.
4. Tombony fanampiny
Ny iPhone 11 Pro dia miaraka amin'ny tombony fanampiny toy ny famandrihana Apple TV maimaim-poana ho an'ireo mpampiasa. Azo atao mandritra ny herintaona rehefa mividy iPhone ianao. Azonao atao ny miditra amin'ny atiny tsara maimaimpoana amin'ny alàlan'ity serivisy ity. Manoro hevitra ireo mpamaky izahay mba hizaha io safidy io. Mahazo mozika paoma koa ny mpampiasa.
Izy io dia tontolo iainana fialamboly.Ireto ny sasany amin'ireo fiasa mahafinaritra izay ho azon'ny mpampiasa iPhone 11 Pro amin'ny fividianany. Manantena izahay fa hanana traikefa tsara amin'ny fividianana ianao.
Modely iPhone 11 Pro:
Ny iPhone 11 Pro dia miaraka amina maodely tsy manam-paharoa maro. Hita amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao ireo. Ireo mpampiasa dia afaka mahazo azy ireo hiantohana ny fandefasana tsara ny asa.
Manoro hevitra anao izahay handalo ireo modely ireo alohan'ny hanaovana ny fividianana. Ireto ny isa maodely iPhone 11 Pro.
Ao amin'ny faribolan'i Amerika Avaratra ihany no misy ny maodely A2160. Ireo mpampiasa avy any Etazonia, Kanada, ary firenena hafa manodidina dia afaka mahazo ity maodely ity. Malaza ihany koa izy io any amin'ny Nosy Virgin US ary ny governemanta Puerto Rico.
Ny telefaona dia manolotra endrika sim roa amin'ny alàlan'ny Sim nano ara-batana sy e-sim virtoaly. Ireo mpampiasa dia hahazo tombony bebe kokoa amin'ny kinova tsy voavaha amin'ny fitaovana. Izy io dia mety amin'ny fampiasanao maharitra. Afaka manana traikefa mahafinaritra ianao hifandraisana amin'ity fitaovana ity.
Ny kinova A2215 an'ny iPhone 11 Pro dia nantsoina ho maodely iraisam-pirenena. Saika manerana an'izao tontolo izao izy io. Afaka mahazo ity kinova ity ny mpampiasa amin'ny fifandraisana mora sy amin'ny fampiasana Internet tonga lafatra. Io no kinova mahazatra izay hita manerana ny tsena lehibe any Eropa sy Azia. Ho hitanao izany any UK, Taiwan, firenena EU, India ary Aostralia. Io koa ilay kinova izay malaza any Japon. Tsy misy kinova manokana ho an'ny A2215. Izy io koa dia miaraka amin'ny endri-javatra sim roa amin'ny alàlan'ny nano-sim sy e-sim.
Ny maodelin'ny iPhone rehetra dia misy dikanteny manokana ho an'ilay fitaovana any Shina sy Hong Kong. Avo indrindra ny fameperana eto amin'ity firenena ity. Nahazo kinova hafa tanteraka amin'ny Internet ny mpampiasa.Ireo mpampiasa dia afaka mahazo ilay kinova tsy voavaha amin'ny vidiny mirary. Be dia be ny fameperana fampiharana eto amin'ity faritra ity. Ny mampiavaka an'ity kinova ity dia ny lozisialy sim dual eo amin'ny fitaovana. Tsy manohana fiasa e-sim izy io.
Mpamatsy telecom vitsivitsy monja no tohana amin'ireo fitaovana. Ao amin'ireo fetra ara-jeografika ihany no azonao vidiana ilay kinova.Ireo no maodely telo an'ny fitaovana hita eny amin'ny tsena erak'izao tontolo izao. Vidio izy ireo Araka ny mahamety anao.
Amin'ity torolàlana ity dia miresaka momba ny fiasa samihafa amin'ny fitaovana iPhone 11 Pro mahafinaritra izahay. Misy safidy an-taonina maro eny an-tsena. Manantena izahay fa afaka namaha ny fisalasalanao momba izany ny mpitari-dalana anay.
Ahoana ny fomba ahazoana ny horonantsary lozisialy 30 andro fitsarana maimaim-poana?
pluto tv ho an'ny Windows 10
aiza no hijerena fizarana maimaim-poana
hoditra minecraft mainty sy fotsy
safidy itunes tsara indrindra ho an'ny android
fandaharana amin'ny fahitalavitra mivantana amin'ny Internet